Axmad – Page 4 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhagaystayaasha idaacadda Al-Furqaan ee jooga dalka iyo dibadiisa ayaa ka hadlay ansixintii uu baarlamaanka Itoobiya ansixiyay saamiga ay ku leeyihiin shidaalka hodanka ku ah dhulka Soomaali-galbeed ee ku jira gumeysiga Xabashida. Dadkan…
Askari kasoo goostay Jubbaland oo ka sheekeeyey dagaalladii ku qabsaday Baar-sanguuni.(Dhagayso)
Maxamed Aadan Dacar, waa askari kasoo goostay maamulka Jubbaland, iskuna dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Waraysi uu siiyay idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayuu kaga sheekeeyay asbaabaha ku riixay inuu kasoo tago askartii…
Taliska milliteri ee Waxarridil Mu’miniin ayaa duulaan ballaaran ku qaaday fariisimiyaal ay ku sugnaayeen malleeshiyaad katirsan kuwa Nuseyriyada Bashaar Al-asad, kuna yaala gobolka Aallaadiqiyah oo ah gobol xeebeed dhaca wuqooyi…
Axmad	 Jun 9, 2019 0
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War duhur 09-06-2019 lite
Maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo taagay muwaadin Soomaaliyeed oo intuu qaatay dhalashada Mareykanka haddana kamid noqday ciidamada Boliska ee dalkaasi. Ninkan oo…
Markii uu billowday kacdoonka Suuriya sanadkii 2011-da, wuxuu Cabdil-baasid As-saaruut kasoo tagay garoomadii kubadda cagta, isagoo ku biiray kacdoonnada ay dhigayeen reer Suuriya, kagana soo horjeedaan nidaamka nuseyriyada…
Suldaan Mayow: Ninkii ay Maraykanku ku dileen Tooratoorow wuxuu ahaa Dullaal.
Suldaan Maxa'ed Abuukar Mayow oo ah Afhayeenka Odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose ayaa waraysi uu siiyay Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan wuxuu kaga hadlay duqeyn ay Maraykanku ka fuliyeen qeybo kamid ah…
Maamulka Aala-sucuud oo qorsheynayo inuu dal dalo wiil isagoo 10 jir ah ka qeybgalay banaanbax ka dhan ah maamulkaas. Telefeshinka laga leeyahay wadanka Maraykanka ee lagu magacaabo CNN ayaa baahiyay warbixin ku aadan in maamulka…
Abey Axmed, oo ah ra’iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa booqasho ku tagay magaalada Al-khardhuum ee caasimadda wadanka Suudaan, halkaas oo uu kulamo kula yeeshay golaha milliteriga iyo kooxaha Mucaaradka. Abey Axmed oo ay safarkiisa…
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalkeena Soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamada Jabuuti khasaare culus lagu gaarsiiyay howlgallo lagula beegsaday gobolkaas. Saddex qarax oo aad u culus ayaa lagu weeraray ciidamada…